« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကျောက်မီးသွေးဝယ်ယူပါလိမ့်မယ်
တင်ဒါကြေငြာချက် - မီးရထားလမ်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်မည်Diyarbakır Kurtalan လိုင်း »
YHT ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ၁၇ ရက်နှင့် ၄ ရက်အတွင်း ၈ ရက်အတွင်း ၄x17 မြေယာယာဉ်များနှင့်ပါဆစ်ဂျင်ကား ၄ စီးဖြင့်ပါ ၀ င်သည်။ ဒါဟာခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
KN: 2020 / 227646
ခ) လိပ်စာ - TCDD YHT ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနတင်ဒါဗျူရို Celal Bayar Bulvarı No: 78, ATG AVM ပထမထပ် Eti Mahallesi ÇANKAYA / ANKARA
ဂ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 03125206349 - 3123090575
က) အမည် - YHT ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအား (၄x၄) မြေယာဉ်များနှင့် (၈၉) ရက်ကျော်သွားပြီဖြစ်သောယာဉ်များအတွက် (၁၇) ရက်တာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
(၄၉) ရက်အတွက် (၁၇) 17x4 မြေအမျိုးအစားအမျိုးအစားယာဉ်နှင့်ယာဉ်ကြော ၄ စီးငှားရမ်းခြင်း။
(ဂ) ထုတ်လုပ်မည့်နေရာ - ANKARA-KONYA-ESKİŞEHİR-BİLECİK
ç) အလုပ်စတင် / ပို့ဆောင်သည့်ရက်စွဲ - အလုပ်စတင်သည့်နေ့မှရက်ပေါင်း ၈၉ (ရှစ်ဆယ်ကိုး) ရက်
ဃ) အလုပ်နေ့စွဲ စတင်. :3စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးသည့် နေ့မှစ. ရက်အတွင်းအလုပ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
က) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှု) ရက်စွဲနှင့်အချိန်: 21.05.2020 - 12: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ယာဉ်ငှားရမ်းန်ဆောင်မှုများ (TÜVASAŞ) ဖြစ်လိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မော်တော်ကားငှားရမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (TÜLOMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မော်တော်ကားငှားရမ်းခြင်းနှင့်ဝန်ထမ်းရေးရာ Service ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်